Creative Writing » ရွှေရင်ဖုံးတုံ့ မဖုံးတုံ့ – BRA Designs and Brands	77
Credit – Internetဘာလို့ ဆို ဘရာ ရဲ့ လေဘယ်မှာ လို့ ရေးထားတဲ့ အေ/ဘီ/စီ/ဒီ တို့ဟာ Cup Size ပါ၊
အောက်တိုဘာ ၁၃ ကို နိုး ဘရာ ဒေး အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသတဲ့ ..To raise awareness for breast cancer
အောင် မိုးသူ says: မျက်မှန်တွေကြည့်ရင်းကနေ ချာချာလည်ပြီးပြန်ထွက်သွားတယ် မကျိ။ နားမလည်တဲ့ ဘာသာရပ်မို့ ပုံလေးတွေပဲကြည့်သွားတယ်။ ဟိဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
အောင် မိုးသူ says: ဘယ်လို ယောက်ျားလေးဝတ်…………။ နေပါစေ နေပါစေ စွပ်ကျယ်တောင် စိတ်ရှုပ်လို့ ဝတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ရှပ်အိကျီ င်္ ဝတ်ရင်တောင် အောက်က စွပ်ကျယ်ခံမဝတ်ဘူး။ နေပါစေ။ ခိခိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ၀င်ဖတ်သူဒွေကို တြောက်တစ်ထည် လက်ချောင်ပေးမားးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: နိနော်။
Wow says: ကွဲစီမ ဆိုဒ်တွေက အကုန်အလွဲဒွေပါအေ.. တစ်ထည်မှ သုံးမြ၀ူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: အတိုင်းအတာပေး မှာလေအေ။
Alinn Z says: အမျိုးသမီး သီးသန့်သာ ကြည့်လို့ရအောင်. . .
Alinn Z says: စကား ဇွတ်ဂျီးစပ် ပြောရ ရင် လွန်ခဲ့တဲ့ လေး ငါးနှစ်လောက်က
ဒီ comment ကို ကျနော် ထပ် လာ မပေးသွားဘူးပဲထားလိုက်ပါနော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ ….
ဂျက်စပဲရိုး says: အဲ့လို ကြပ်ကြပ်ကြီးတွေ ဝတ်ခြင်းအားဖြင့် ကင်ဆာ တို့ အသားအရည် မကောင်းတာတို့လဲ ဖြစ်တတ်တယ် ဆိုလား လား လား
ခင်ဇော် says: ဟယ်။ ကျန်းးး
ဂျက်စပဲရိုး says: ငင့်… knowledge base က ဒီနေရာမှာ တင် ရပ်သွားပါပြီ ခည…
တောင်ပေါ်သား says: ဘာများလည်းလို့
အို သားသား အဲဒါတွေ နားအလည်ဘူး လို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဒါတွေ နားလည်တာ နားမလည်တဲ့ အမျိုးသားတွေ အတွက် တစ်ပန်းမက သာတယ်ဗျ။
Ma Ma says: အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းပေးထားတာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဗဟုသုတ ရစေလို့ အကျိုးများလှပါတယ်။
ပြောရမယ်ဆို ကိုယ်လည်းခုမှသိတော့တာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဒီရောက်မှ သိတာ ချစ်မရဲ့။
Mike says: .ခိခိ မလျှော့မတင်းစောင်းကြိုးညှင်း ၀တ်ရမှာပေါ့နော်..အယ်..ငါဘာတွေပေါနေမိပါလိမ့် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဒါပေါ့။
Kaung Kin Pyar says: 18+ မဟုတ်ဘဲ…lady only ပေမယ့်…အဟီးးးး အားပေးသူအများစုကို ကြည့်ရခြင်းအားဖြင့်…ဗဟုသုတရှာလိုသူတွေ ရွာထဲရှိနေတာ သိလိုက်ရဘီ….။
chate chate says: ဗဟုသုတများစွာရရှိပါကြောင်း….:)
ခင်ဇော် says: လာအားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် chate chate လေး
ဇေယျာစံ says: ဘရာ စပါယ်ရှယ်လစ်ပါပဲ ဗျာ ..
ခင်ဇော် says: သများ စပယ်ရှယ်လစ် တဲ့ တခြားဟာတွေ ရှိပါသေးတယ်လို့။
Fall Guy says: D ​လောက်​​တော့အနည်းဆုံးရှိမှ အဆင်​​ပြေမှာ :-D
ဟို ​လောက်​ဆိုရင်​မဖြစ်​​လောက်​ဖူးမို့ :-D
ခင်ဇော် says: သများလည်း ဒီ လောက် ဆို တော်ပါပြီ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: နိုင်ငံဂျားက ရှော့ပင်းမောတွေမှာ …
ခင်ဇော် says: Within our Men’s Lingerie section, you can find boxers, briefs, pajamas, robes, pouches, shorts and more။
မြစပဲရိုး says: မှတ်မှတ် ရရ သူကြီး တင်ပေးလိုက်တဲ့ လက်ချောင်းတွေ ပုံ ကို ကြည့်ပြီး ” အေ” တွေ အတော်များများ ကြော်ငြာလိုက်ကြတာ။
ခင်ဇော် says: အရီးကော်မန့်ဖတ်ပြီး မနက်အစောကြီး ရီလိုက်ရတာ။
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဟဟိဟိ လွဲဒမှတည့်တည့်ဂျီးလွဲ။ ဒါဒေတထုမှမတိ။ ခုမှသိ။ အိမ်ကရှိဒါဒေအကုန်လွှင့်ပစ်ပီးအသစ်ပြန်ဝယ်ရတော့မထင့် ဟမလေးကုန်ဘာဘီ။ ဒါ့ထက် ဒီမှာကနံပါတ်နဲ့ဘဲဝယ်ဖူးဒါဆိုတော့ ABCD ဘိုခွဲလဲသေချာသဘောမပေါက်သေး။ ပုံဒေကလဲဆေ့မရဘူးရယ်။ ဆိုင်သွားချုပ်ရင်တော့ ဆိုင်ကသူတို့နံပါတ်နဲ့ပေးလိုက်တာပဲ။ နောက်ထပ်ဝဟ်ချင်ရင်အိုက် Cap နံပါတ်ပြောလိုက်ထုပ်ပေးကော။ ရှော့ပင်းမောမှာဝယ်ရင်တော့ ကိုယ်လုံးတော်ရင်ယူလိုက်တာပဲ။ သများက C လား D လားငမ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: သဲ ရဲ့!!!
မွသဲ ( 17082011 ) says: ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ရဘီကွ လက်ဆောင်ပေးလိုသူများ နံပါတ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါဘီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ပြောပြ
Ma Ei says: A,B,C,D တွေ ခုမှသိတော့တာ…
ခင်ဇော် says: ဟဟဟ။
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဟိဟိ ဟိုပုံပြင်ထဲကလို အုံကိုလက်နဲ့တိုင်းသွားဒါ ခလုတ်လဲတိုက်ကော လက်ကကားသွားရောဆိုဒါမိုးလေးတိုင်းရမာလားငင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1988
Shwe Ei says: -ဘရာ အသစ်လဲဖို့ စိတ်ကူးနေတုန်း အခန့်သင့်သွားတယ်…
-မျော့ကြိုး ညောင်းပီး ဖော့တွေ ပုံစံမကျတော့ တဲ့ ဘလာများ လှူဒါန်းလိုက်ပါတော့မည် :P
black chaw says: တားတား ဂ အဲ့လိုအကြောင်းတွေ ဖတ်ဖို့ အင်အားမရှိပါဘူး…။
ခင်ဇော် says: သူ ဆို ဒီဒီ လောက် ရှိမှာပေါ့။
kai says: သခင်ဗသောင်းကတော့.. ဗမာမတွေ.. အတင်းကျပ်နေအောင်စည်းထားတာကို.. အပြစ်ပြောတဲ့စာရေးဖူးတယ်..။
ကာလီဒါသရဲ့.. ကာမသျှတ္တရထဲမှာလည်း. မိန်းမတို့ရဲ့.. ညို့အားအကောင်းဆုံးနေရာတခုအဖြစ်.. ရင်အောက်သားကို.. ညွှန်းတယ်လို့.. ဖတ်ဖူး..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ကိုယ်လုံးး နဲ့ လိုက်သလောက် ပဲ ကောင်းးပါတယ်လေ..
ဝန်နဲ့ အားး မျှမှ ကြည့်လှ… ကေတီဘယ်ရီ လိုမျိုးး ကို ကြိုက်တာဗျ
padonmar says: ဂျပန်တွေကတော့ Cup size ကို A,B,C,D,E
ခင်ဇော် says: ကျေးးကျေးးပါ အာတီဒုံ.!!
ကူမားရ် says: ဘာဘာ ဘာ မှသိဘူး.. ရှလွတ်တ်တ်တ်တ်…
kai says: ဗမာတွေ.. ရှက်စရာလို့ထားတာမှာ. ရင်သားပေါ်တာဖေါ်တာကို.. အဓိကအခဏ်းကဏ္ဍဖြစ်နေသလည်း.. တွေးနေမိ…။
သဘာဝဟာ… သဘာဝပါ..။ ပြောသာပြောတာ…
Mr. MarGa says: ငမ့် သဂျီး
(အဲ ပြီးမှ ရောဂါတက်လာရင်တော့ ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ကိုယ်) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ဘာလဲ trypophobia ??
ခင်ဇော် says: ကျန်းးးးး
အဲလာ ကြာခွက်နဲ့ ဖိုတိုရှော့ လုပ်ထားးတာဆို?? Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: သပ်တိရှိ ဝတ်ပြပါရား လူမိုက်ခင်ဇော်
ခင်ဇော် says: ဝတ်ပြထားတယ်လေ၊
Mr. MarGa says: ဘာတွေလဲဟင်
ခင်ဇော် says: နောက်ဆို ဆိုင်လာမှာ။
Ma Ei says: မနက်က ရုံးအလာ Lift ထဲမှာ A ကလေးတယောက်တွေ့တယ်…
ခင်ဇော် says: ဟုတ်တယ် မွအိ။
manawphyulay says: အင်းမှပဲ သေချာနားလည်သိတော့တယ်။ မသိပေါင် ၀ယ်လိုက်တာပါပဲ အဟဲ.. အဆင်မပြေ နောက်တစ်ထည်ပေါ့…..:mrgreen:
naywoon ni says: oct 13 ဆိုတာ​လေး ပဲမှတ်​မိတယ်​ ဟိဟိ
ခင်ဇော် says: မနှစ်က အဲဒီ နေ့သများ ဓာတ်ပုံတင်တယ်ကော
nozomi says: ဝင်ဖတ်တဲ့ ထဲ ကျား အင်အား ကလဲ မနဲ ပါလား
ခင်ဇော် says: ဘူ လှူမို့လဲ။ အမျိုးထဲက ကောင်မလေးတွေ လှူမို့လားးး
Crystalline says: ဘလန်း​တွေက ဝိတ်​ရတာ..သက်​​တော့သက်​သာရှိတာက​တော့ ကိုယ်​​တွေ့..
Wacoal က​တော့ ခါးရှည်​​တွေလည်းရှိ​တော့ ပိုဝတ်​ဖြစ်​တယ်​.. ​Gapကချည်​သား ​ဘောင်း​ဘောင်း​လေး​တွေလည်း.. ဝတ်​​ကောင်းသား.. ​ဈေးလည်းမဆိုး. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
အရီး လေး says: ​တော်​​တော်​ စုံ​အောင်​ရှာထားတယ်​ ​
ခင်ဇော် says: အရီးလေးးး
အရီး လေး says: မကြာမကြာ​တော့ဝင်​ဖတ်​ဖြစ်​ ​ပေမယ့်​
ဇီဇီခင်ဇော် says: https://www.facebook.com/darli.mayaye/posts/550352878437369
King says: FB မှာ အမျိုးသားတွေ လာနဲ့ ဆိုလို့ လာကြည့်တာ ..
ခင်ဇော် says: သိတဲ့ ကျားး က
King says: ငင့်
ခင်ဇော် says: Third Love အမျိုးသမီးအတွင်းခံထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ဗဏီက အမျိုးသမီးရင်သားပုံသဏ္ဍာန် ၇ မျိုး ဖော်ပြ
ခင်ဇော် says: 😂
kai says: ဘုန်းကြီးတပါးပြောတာ ကြားဖူးတယ်..။ နိုင်ဂျံဂါးမှာမရှိတဲ့ ဆိုဒ်လားတော့မသိ..။
ဘိန်းမုန့်ပေါ်ပဲပြုတ်တင်ထားတာတဲ့..။ ၀င်္က၀ုတ္တိအလင်္ကာမြောက်သလားတော့မသိ…။ ခွိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ကြက်ဥကြော်နဲ့ စားတော်ပဲ ဆိုလား ကြားဖူးးတာ ခွိ…!!